खाँसीको खाडीको लागि के एंटीबायोटिक्स
कुन एन्टिबायोटिक पेर्टसिसको उपचार गरिन्छ? होशियार हुनुहोस्, अहिल्यै, प्राध्यापकले तपाईलाई मशरूम फ्राई गर्न सल्लाह दिनेछन् वा उदाहरणका लागि १०० डलर लिन र मलाई फार्मेसीमा बताउनुहोस् मलाई सबै कुराको लागि ट्रामाडोल दिनुहोस् र ...
लिम्बूबेरीले रक्तचाप बढाउँदछ वा रक्तचाप घटाउँछ?
के लिंगोनबेरीले रक्तचाप बढाउँदछ वा कम गर्छ? चोकबेरी द्वारा दबाव कम गरिएको छ। लिंगोनबेरी एन्टिहाइपरटेन्सिभ ड्रग्ससँग सम्बन्धित छैन। फेडरल रेजिष्टर्स अफ मेडिसनहरू हेर्नुहोस् :) यो हल्का मूत्रवर्धक हो, जसको मतलब यसले अलि कम गर्छ। रक्तचापलाई सामान्य बनाउँदछ, यदि यो ...
भ्यागुओनिया के हो?
भोटोटोनिया भनेको के हो? प्रिय जारा! मानव शरीरको स्नायु प्रणालीमा, केन्द्रीय र परिधीय बाहेक, त्यहाँ तथाकथित स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली पनि छ, जुन फलस्वरूप दुई प्रकारले प्रतिनिधित्व गर्दछ: प्यारासिम्पेथेटिक ...
सबैभन्दा इष्टतम एड़ी ऊँचा के हो?
सबै भन्दा राम्रो कुर्कुचाइको उचाई के हो? तपाइँको लागि सुविधाजनक एक। हिंड्न सजिलो र सहज बनाउन। मैले हालसालै कतै पढेको थिएँ कि ११ सेमी सेप्टिको हिलले संभोग गर्न सहयोग गर्छ किनभने यदि तपाईं हिंड्नुहुन्छ भने ...
लरीगाइटिस कसरी उपचार गर्ने? र यो संक्रामक हो?
Laryngitis कसरी उपचार गरिन्छ? र यो संक्रामक हो? संक्रामक होइन, तर ईन्जेक्सनको साथ राम्रो छ। तपाई यसलाई औषधीको औषधी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न इन्जेक्सनको लागि मात्र सोध्नुहोस्। लेरेन्जाइटिस स्वरयंत्र र भोकल डोरीको सूजन हो, जो स्पष्ट घोर्सनेसद्वारा प्रकट हुन्छ, ...
बच्चा मा फ्लैट भल्लस फ्लैटफुट के छ?
बच्चामा फ्लैट-भल्गस सपाट खुट्टा के हो समतल खुट्टा को एक रूप। उपचार - उचित पोषण, शारीरिक गतिविधि, सही फुटवियर, आवधिक वा लगातार उपचारात्मक जिम्नास्टिक, आवधिक मालिश र बाल चिकित्सा ओर्थोपेडिस्टलाई आवधिक भ्रमणहरू ...
यो कपाल बढ्न कत्तिको हुन्छ? तर सबै बालबालिकाहरू होइनन्, तर केवल एक बान्गी
कपाल विस्तार गर्न कति खर्च हुन्छ? तर सबै कपालहरू होइन, तर केवल बैs्गहरू, १ बन्डल कपालको लागत १२० रूबलबाट कतै जान्छ। यदि औसत १००२०० बीमहरू सम्पूर्ण बोसकामा खर्च गरिन्छ भने (भन्दा ...
56 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,972 प्रश्नहरू।